Izityalo zasendlini | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokwenza isihlahla seShefler?
Ungayifumana njani i-Shefler kwi-bush ngokuchanekileyo? Andizukuxelela kwi-intanethi! Kuya kufuneka uchumise isityalo sakho kube kanye, usitshize kanye ngemini, kwaye yonke imihla, amanzi kancinci, kufuneka ume ...
Iingcebiso zononophelo zeChestnut
Iingcebiso zokukhathalela ii-chestnuts zangaphakathi bendinazo i-chestnut, ndiza kukuxelela ngaphandle kwe-Intanethi, ikhula kakuhle, iyathanda ukunkcenkceshela ehlotyeni, akuyomfuneko ukungcwaba amantongomane, ebusika iwisa amanye amagqabi ...
Nguwuphi umhlaba ofunekayo kwiKalanchoe?
Loluphi uhlobo lomhlaba olufunekayo eKalanchoe? Umhlaba weKalanchoe uthathwa ungathathi hlangothi okanye une-asidi encinci (pH 5,5-6,5). Izityalo zikhula kakuhle kumxube oqhelekileyo weSucculents. Izityalo ezincinci zitshintshelwa kumxube wamalungu amane ...
Yintoni ekunyamekela ngayo uMraya. Kutheni iimbali ezingapheliyo ziwela kwi-XMUMX encinci ubudala uMurai omncinci?
Loluphi ukhathalelo olufanelekileyo kumuraya. Kutheni le nto iintyatyambo ezingatyibiliki ziwela kumntwana omncinci oneminyaka emi-2 ubudala? Ngentwasahlobo ndathenga imuraika ngamagqabi. Kwakhona malunga ne-10 cm.Isigwebo sabalimi beentyatyambo sasingathandabuzeki - ukuba singadubuli.
Ungayinisela njani i-orchids?
unkcenkceshela njani iiorchid? Ndixelelwe ukuba kunyanzelekile ukuba ndisongeze amanzi rhoqo kwisump kwaye ndiqiniseke ukuba akhona ngalo lonke ixesha, kwaye ndenza njalo. Nantsi into enokuyenza ukwenza i-orchid kwakhona ...
Nceda undixelele ukuba kunokwenzeka yini ukusebenzisa izibane zepvivithi zezityalo zangaphakathi?
Ungandixelela ukuba izibane ze-UV zinokusetyenziselwa izityalo zangaphakathi? Enkosi, ndifunde malunga ne-ULF, kodwa ngaba kunokwenzeka ukuba usebenzise izibane ze-DNAT zokukhanyisa okungaphezulu kwezityalo ezinje ngeetumato, iipepile, ii-eggplants. Ukusetyenziswa kwemitha yelanga ...
Indlela yokutya i-phalaenopsis yezimbali?
Ukondla njani ukukhula kwephalaenopsis ngokufanelekileyo? I-Phalaenopsis - i-evergreen engathobekiyo, ii-orchids ezikhula rhoqo Iindidi zazo kunye neehybrids ezikhula phantse unyaka wonke zilungele abaqalayo. Ngononophelo olufanelekileyo, iPhalaenopsis iqhakaza kakhulu kwaye ixesha elide ...
Ndixelele ukuba ndenzeni ukuba isundu lishiya amacebiso athile? Ngaba kukho isichumiso esikhethekileyo?
Ndixelele ukuba ndenze ntoni xa iingcebiso zamagqabi omthi wesundu zomile? Ngaba sikhona isichumiso esikhethekileyo? Andazi ngokunkcenkceshela, kodwa ukuba igqabi lesine livela njani kumthi wesundu, elokuqala liqala ukoma. Kufuneke u ...
Indlela yokutshiza ama-succulents? Ndingathanda imiyalelo ecacileyo yomqala.
Ungatshintsha njani iisucculents? Ndingathanda imiyalelo eneenkcukacha yabaqalayo Ukukhethwa kwembiza. Kuyimfuneko ukuba ukhethe ubungakanani obufanelekileyo kunye nobume bembiza, kuxhomekeke kuphuhliso lwenkqubo yeengcambu zohlobo lwecactus oya kuyo ...
Yintoni eyingozi i-dieffenbachia? Kutheni kuthiwa yingozi?
Kutheni i-dieffenbachia iyingozi? Kutheni kusithiwa inetyhefu? malunga neiglavu - zipholile! Kwaye nokuphefumla! Kwaye esinye isichazi-magama! Ndifundile ukuba ibangela ukungabi namandla kwendoda kwaye iyingozi kakhulu kwiikati. Ikati yam…
Iintyatyambo ebhokisini kufuneka zityetywe?
Ngaba iintyatyambo zebhaskithi zifuna ukunkcenkceshelwa? Qiniseka Ewe, qiniseka, iintyatyambo nazo zisela amanzi. kwaye kufuneka iphinde igcwaliswe. Ngokuqinisekileyo kufuneka uyinkcenkceshele !!! UTatiana, ngokuhlwa! Esi siponji sineentyatyambo eziluhlaza kufuneka sigutyungelwe AMANZI !! ...
Amaqabunga aphikisiwe kwi-ficus
I-Ficus ishiya i-curl kunokubakho izizathu ezininzi zoku. Ukukhuphela ngaphandle izifo, kuya kufuneka ujonge ngononophelo igqabi elijijekileyo ukuze ubone amabala kunye nokungahambi kakuhle. Ukuba kunjalo, kunokwenzeka ukuba uyificus yakho ...
yintoni i-cactus eluhlaza ... ngameva iCacti zizityalo ezinencasa, iziqu zazo ezinamagqabi ezigqunywe ngamaqela eenwele ezantsi. Phantse zonke ii-cacti azinamagqabi aqhelekileyo, uninzi lunameva. Ba…
Iyiphi ixesha lokukhula kwezityalo?
Lithini ixesha lokukhula kwezityalo? Ixesha lokuphuhliswa, ukukhula okusebenzayo.Lombuzo sele ulapha http://otvet.mail.ru/question/17180703 Ixesha lezityalo (ukusuka ekuvuseleleni imifuno yaseLatin, ukukhula) lixesha lonyaka apho ukukhula nokukhula kunokwenzeka ...
Ungawuthena umthi wemali? Amasebe anzima kakhulu ... athobe phantsi ... kwaye aphule ...
Ngaba kunokwenzeka ukuthena umthi wemali? Amasebe anzima kakhulu ... athobe phantsi ... kwaye aphule ... Kunzima! Isandla sam asiphakamisi iinwele ezinje. Qiniseka ukuba Sika nangona ufuna, ivela ...
Ufuna nini ukunqumla umntakwabo kaKarssula?
Kufuneka usicofe nini isityalo esincinci seCrassula? Ndiyacofa xa kuphuma amagqabi amabini amancinci. Ndenze eyam yaba yeyomgangatho. Ngokubanzi, ikhula apha ngaphandle kokuncinanana ... Kwaye ...
Kutheni amaqabunga ephendukile? Yintoni efunekayo kule sityalo?
Kutheni le nto uKalanchoe Kalandiva amagqabi ajike abe tyheli? Loluphi uhlobo lokhathalelo olufunekayo kwesi sityalo? Amagqabi ajika abe tyheli aze awe Amagqabi asezantsi esityalo esidala ajika abe tyheli ngokuhamba kwexesha aze awe. Inini lento ...
Ziziphi izibane ezisetyenziselwa ukunyusa i-cannabis?
Zeziphi izibane ezikulungeleyo ukukhula i-cannabis? Ukukhanya okongezelelekileyo, izibane ze-incandescent azikulungelanga ukukhanya kuphela, zisebenzisa kuphela i-3% yombane osetyenzisiweyo kwaye enye yimitha ye-thermal. Ukhetho olwamkelekileyo ngakumbi lwesibane ...
Yintoni isityalo "UKUZUKA EKUSENI"
Sisiphi isityalo "UKUZUKA EKAZUKWENI" Ipomoea (Ipomoea Violacea); - usapho: Convolvulaceae; - igama eliqhelekileyo: Ipomoea; - iintlobo: i-violacea (ubuqaqawuli basekuseni) -imvelaphi: iintaba zasemazantsi eMexico, iGuatamala, ii-West Indies, kunye neetropiki zase Mzantsi ...
Iliphi ilizwe elungileyo kwizityalo zangaphakathi?
Nguwuphi umhlaba olungele izityalo zangaphakathi? Kule mihla, iivenkile zithengisa imixube eyahlukeneyo yezityalo kwizityalo ezahlukeneyo. Funda inkcazo kwiiphakheji, yonke into ibonisiwe apho. Kwisilwanyana sakho apho ...
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,157.